Martin Luther King ကို ၁၉၂၉ ခုနှစ်တွင် Memphis တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း၏သင်းအုပ်ဆရာဖြစ်လာပြီးသူသည်အာဖရိက - အမေရိကန်နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုကိုစတင်ခဲ့သည်။
သူ့ကို ၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင်ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုချီးမြှင့်ခဲ့သည် အကြမ်းမဖက်သောနည်းလမ်းများဖြင့်လူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆံမှုကိုတိုက်ဖျက်ရန်.
သို့သော်သူသည်အစ မှနေ၍ ယေဘုယျအားဖြင့်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကိုဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့သည်သာမကဗီယက်နမ်စစ်ပွဲကိုဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုများလည်းပြုလုပ်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင်ဒုတိယတာဝန်ကိုအဓိကထားအာရုံစိုက်ခဲ့သည်။ ၁၉၆၈ ခုနှစ်4ပြီလ ၄ ရက်အထိသူစီစဉ်ထားသည့်ညစာစားပွဲသို့သွားစဉ် Memphis တွင်အသတ်ခံရသည်။ သူငယ်ချင်းတချို့နှင့်
သို့သော်လှုပ်ရှားမှုစတင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်၊ ယနေ့ပင်၎င်း၏သက်ရောက်မှုနှင့်နေ့စဉ်ဘဝကဏ္ aspects များစွာတွင်ရုန်းကန်မှုကိုဖြစ်စေသောစကားစုများဆက်လက်တည်မြဲနေဆဲဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှ ထပ်မံ၍ နှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲ၊ သင့်ကိုအောက်တွင်ပြမည် မာတင်လူသာကင်း၏အကောင်းဆုံးစကားစုများ.
နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ကြာပြီးနောက် Negro သည်ချမ်းသာကြွယ်ဝသောပင်လယ်ဝန်းကျင်ရှိဆင်းရဲသောကျွန်းတစ်ကျွန်းပေါ်တွင်ဆက်လက်နေထိုင်သည်။
လူတစ် ဦး ချင်းစီသည်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာအပြုသဘောဆောင်သည့်အပြုအမူများအရလည်းကောင်း၊ ပျက်စီးခြင်းအတွက်တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သောအမှောင်ထု၌လည်းကောင်းလျှောက်လှမ်းရမည်ကိုဆုံးဖြတ်ရမည်။
သင့်ဘဝရဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်ပါစေမှန်ကန်စွာလုပ်ပါ။ လူသည်အသက်ရှင်သောသူ၊ သေသောသူ၊ မမွေးသောသူသည်မစွမ်းနိုင်ရာ။
"ခေတ်သစ်လူသားကိုကြည့်လိုက်ရင်ခေတ်သစ်လူသားဟာဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ ၀ ိညာဉ်တစ်မျိုးနဲ့ခံစားနေရတာကိုတွေ့ရမှာပါ"
မင်းမှန်တယ်ဆိုရင်တော့မင်းကမင်းကိုအရမ်းအစွန်းရောက်လို့မရဘူး။ မင်းမှားသွားရင်ရှေးရိုးစွဲမဖြစ်နိုင်ဘူး။ "
“ ချစ်ခြင်းမေတ္တာမရှိဘဲပါဝါသည်ကြမ်းတမ်း။ ဖိနှိပ်ချုပ်ခြယ်မှုရှိပြီး၊
“ ခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကိုကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းပြီးထိန်းသိမ်းရမယ်။ ခွင့်လွှတ်နိုင်စွမ်းမရှိသူသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကင်းမဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အဆိုးဆုံးထဲမှာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခု၊ ပြီးတော့အကောင်းဆုံးထဲမှာမကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်။ ဤအရာကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ရန်သူများကိုမုန်းတီးရန်အလားအလာနည်းသည်။
"စကြဝtheာ၏ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ arc ကိုတရားမျှတမှုတံတောင်ဆစ်မှာကွေး။ "
"Negro ဟာprosperရာမသမုဒ္ဒရာအလယ်မှာရုပ် ၀ တ်ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုအလယ်မှာရှိနေတဲ့အထီးကျန်ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ကျွန်းပေါ်မှာနေတယ်"
"လူသားတွေရဲ့တိုးတက်မှုဟာအလိုအလျောက်လည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ တရားမျှတမှုပန်းတိုင်ဆီသို့ ဦး တည်တိုင်းခြေလှမ်းတိုင်းဟာစွန့်လွှတ်အနစ်နာခံခြင်း၊
“ အကြမ်းဖက်မှုကို passively လက်ခံသောသူသည်၎င်းကိုဆက်လက်ကျူးလွန်ရန်ကူညီသူကဲ့သို့၎င်းတွင်ပါ ၀ င်ပတ်သက်သည် မကောင်းမှုကိုလက်ခံသူသည်ဆန္ဒမပါဘဲပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သည်။
“ အကြမ်းမဖက်ရေး၏အဓိကအချက်မှာချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏နိယာမဖြစ်သည်။ ”
နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ကြာပြီးနောက်လူမည်းတွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်လွတ်မြောက်လာတာကိုကြည့်ရတာဝမ်းနည်းစရာပါပဲ။
"ငါ့ကိုလျှာ၊ လက်သီးဒါမှမဟုတ်နှလုံးကနေထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းရှိမရှိအကြမ်းဖက်မှုကနေကာကွယ်ပါ။ "
ငှက်များကဲ့သို့ပျံတတ်ရန်၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ဟာရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနေထိုင်ခြင်းကိုညီအစ်ကိုတွေအဖြစ်နေထိုင်ခြင်းကိုမသင်ယူခဲ့ကြဘူး။ "
John Kenneth Galbraith ကနှစ်စဉ်ဝင်ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံ ၀ န်းကျင်ရရှိရန်အာမခံနိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ တဖန်ငါဆိုသည်ကား၊ အကယ်၍ ငါတို့နိုင်ငံသည်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင်မတရားမှုနှင့်မတရားသောစစ်ပွဲများအတွက်တစ်နှစ်လျှင်ဒေါ်လာ ၃၅ ဘီလီယံသုံးစွဲနိုင်ပြီး၊ လူတစ်ယောက်ကိုလပေါ်မှာတင်ရန်ဒေါ်လာနှစ်ဆယ်ဘီလျံသုံးစွဲလျှင်ဒေါ်လာထောင်နှင့်ချီ။ ကုန်လိမ့်မည်။ ဘုရားသခင့်သားသမီးများကိုသူတို့၏ခြေတင်ရန်ဤကမ္ဘာပေါ်တွင်ထားရန်ဖြစ်သည်။
"မျက်စိအတွက်မျက်စိ" ၏ရှေးဥပဒေကလူတိုင်းမျက်စိကန်းစေသည်။ မှန်ကန်တဲ့အရာလုပ်ဖို့အချိန်ကအမြဲတမ်းမှန်ပါတယ်။ "
လူတစ် ဦး ၏ဘဝအသက်တာမဟုတ်ဘဲအရည်အသွေးသည်အရေးကြီးသည်။
ပညာရေး၏လုပ်ဆောင်ချက်မှာအပြင်းအထန်စဉ်းစားရန်နှင့်ဝေဖန်ရန်စဉ်းစားရန်သင်ကြားရန်ဖြစ်သည်။ ဉာဏ်ရည်နှင့်အနုပညာလက္ခဏာ - ဒါကစစ်မှန်တဲ့ပညာရေးရဲ့ရည်မှန်းချက်ပဲ။ "
လူတွေကတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကြောက်လန့်လို့မရကြဘူး။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်မသိတဲ့အတွက်ကြောက်တယ်၊ သူတို့ဆက်သွယ်မရကြသောကြောင့်, သူတို့ကလူသိများကြသည်မဟုတ်။
"အကြီးမားဆုံးအဖြစ်ဆိုးကလူဆိုးတွေကိုဖိနှိပ်တာနဲ့ရက်စက်တာမဟုတ်ဘူး။ လူကောင်းတွေရဲ့တိတ်ဆိတ်မှုပဲ။ "
“ အကြမ်းမဖက်တာဟာအစွမ်းထက်ပြီးတရားမျှတတဲ့လက်နက်တခုဖြစ်ပြီးကိုင်တွယ်သူကိုထိခိုက်နာကျင်စေခြင်းမရှိဘဲခုတ်ထွင်နိုင်တဲ့လက်နက်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာဓားကိုပျောက်စေတယ်။ "
အမှောင်ထုသည်မှောင်မိုက်ပျောက်ကွယ်သွားမည်မဟုတ်။ အလင်းသာလုပ်နိုင်သည် အမုန်းကအမုန်းတရားကိုမောင်းထုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ အချစ်ကသာလုပ်နိုင်တယ်
“ မေးခွန်းကကျွန်တော်တို့ဟာအစွန်းရောက်တွေဖြစ်မလားဆိုတာမဟုတ်ပါ။ ဘယ်လိုအစွန်းရောက်ဝါဒီတွေဖြစ်မလဲဆိုတာပါပဲ။ နိုင်ငံနဲ့ကမ္ဘာဟာဖန်တီးမှုအစွန်းရောက်ဝါဒီတွေကိုအလွန်အမင်းလိုအပ်နေပါတယ်”
ကျွန်ုပ်၏ကြိုးပမ်းမှုများကြောင့်အများဆုံးထိခိုက်ခဲ့သောဒေသများမှာ Chicago နှင့် Cleveland တို့ဖြစ်သည်။
ညီအစ်ကိုတို့၊ ယနေ့ငါဆိုသည်ကား၊ ယနေ့အခက်အခဲများနှင့်နက်ဖြန်နေ့၌ရှိသောဆင်းရဲခြင်းကိုတွေ့။ ၊ ငါနေဆဲအိပ်မက်ရှိသည်။ "
အဘယ်အရာကိုတစ် ဦး အကျိုးသက်ရောက်စေတိုက်ရိုက်သွယ်ဝိုက်အားလုံးသက်ရောက်သည်။ သငျသညျဖြစ်သင့်သည်အထိငါဖြစ်သင့်သောအရာကိုမဖြစ်နိုင်ပါ။ ဒါကအပြန်အလှန်ဆက်စပ်နေတဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပဲ။ "
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိမည်သည့်အရာကမျှစိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်မသိဘဲနှင့်မိုက်မဲသောသြတ္တပ္ပစိတ်ထက် ပို၍ အန္တရာယ်ရှိသည်။
အဘယ်အရာကိုမျှတစ်ခုထက်ပိုပြီးတစ် ဦး ပြစ်မှုထက်မေ့လျော့လျက်ရှိ၏ နှင့်မျက်နှာသာထက်ပိုမြန်ဘာမျှမ။ "
"ကျနော်တို့သမိုင်းလုပ်မထားဘူး။ ကျနော်တို့သမိုင်းအားဖြင့်လုပ်နေကြသည်။ "
"မင်းဘယ်လောက်ကြာကြာအသက်ရှင်နေထိုင်နေတယ်ဆိုတာအရေးမကြီးပါဘူး။ ဘယ်လိုကောင်းမွန်စွာနေထိုင်ပြီးငယ်ငယ်တုန်းကသေတယ်ဆိုရင်အသက် ၈၀ အထိလူတစ် ဦး ထက်ပိုပြီးလှူဒါန်းခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်"
ကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးများအရွယ်ရောက်ပြီးသောအိပ်မက်များကို "အဖြူရောင်မှသာ" အချက်ပြခြင်းများဖြင့်စွဲမက်နေသရွေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျေနပ်မှုမရနိုင်ပါ။
မစ္စစ္စပီရှိ Negro သည်မဲမပေးနိုင် သ၍ နယူးယောက်ရှိ Negro သည်သူ၌မဲပေးပိုင်ခွင့်မရှိသရွေ့ကျေနပ်အားရမှုမရှိနိုင်ပါ။
"အရေးကြီးတဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါတို့တိတ်ဆိတ်သွားတဲ့နေ့ကငါတို့ဘ ၀ တွေအဆုံးသတ်သွားတယ်။ "
ကျွန်ုပ်တို့၏သိပ္ပံစွမ်းအားသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိညာဉ်ရေးစွမ်းအားထက်သာလွန်သည်။ ကျနော်တို့ဒုံးကျည်များနှင့်မှားသောယောက်ျားလမ်းညွှန်ပါပြီ။ "
ဂျာမနီမှာဟစ်တလာလုပ်သမျှအရာရာတိုင်းဟာတရား ၀ င်တယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့။
ကောင်းမွန်သောအတွေးအခေါ်ကိုလိုလိုလားလားရှိသည့်ယောက်ျားများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရခဲသည်။ အဖြေများနှင့်တစ်ဝက်သောဖြေရှင်းနည်းများကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်ရှာဖွေခြင်းများရှိသည်။ အချို့လူများကစဉ်းစားရန်လိုသည်ထက် ပို၍ နာကျင်စေသည်။ "
"အကယ်၍ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသေခြင်းဆိုတာငါ့ရဲ့အဖြူညီအစ်ကို၊ ညီအစ်မတွေကိုသေခြင်းတရားကနေလွတ်မြောက်ဖို့ပေးဆပ်ရမယ့်အဖိုးအခဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘာမှပိုရွေးစရာမလိုတော့ဘူး"
သင်သည်မပျံနိုင်လျှင်။ ပြေးလို့မရဘူးဆိုရင်လမ်းလျှောက်ပါ။ မင်းလမ်းမလျှောက်နိုင်ရင်တွားသွားနိုင်မယ်၊ မင်းဘာပဲလုပ်လုပ်မင်းဆက်လုပ်သွားမှာပါ”
"ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကိုတက်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ ကျွန်တော်တို့ပြန်လှည့်ပြီးဒီအဖိုးတန်တန်ဖိုးတွေကိုပြန်လည်ရှာဖွေရမယ်။ အဖြစ်မှန်အားလုံးဟာကိုယ်ကျင့်တရားအခြေခံပေါ်မှာမူတည်တယ်။
"တစ်နေ့မှာ Alabama ပြည်နယ်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟာလူမည်းတွေရဲ့လူမည်းတွေရဲ့ဖျက်သိမ်းမှုနဲ့လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုအကြားအပြန်အလှန်ဆက်စပ်မှုကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့နေရာမှာလူမည်းယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးငယ်များသည်အဖြူရောင်ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများနှင့်လက်တွဲနိုင်သည့်နေရာဖြစ်လာလိမ့်မည်။ ညီအစ်မတွေအဖြစ်။ "
"ကျနော်တို့ကအကန့်အသတ်ရှိတဲ့အမြင်နဲ့သင့်တော်တဲ့နှိမ့်ချမှုအားလုံးနဲ့စကားပြောရမယ်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်။ "
လူတိုင်းကအစေခံနိုင်တာပေါ့။ သင်ဟာကောလိပ်ဘွဲ့ရစရာမလိုပါဘူး။ ကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်ဝသောနှလုံးသားတစ်ခုသာလိုပါတယ်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့တစ် ဦး စိတ်ဝိညာဉ်။ "
"ငါတို့အားလုံးအပြင်ထွက်ပြီးပြောသင့်တယ်" အမေရိက "
"တစ် ဦး နှောင့်နှေးပိုင်ခွင့်ငြင်းပယ်ပိုင်ခွင့်ဖြစ်ပါတယ်။ "
လူသားတစ် ဦး ချင်းစီ၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုကန့်သတ်ချက်ထက် ကျော်လွန်၍ လူသားထုတစ်ရပ်လုံး၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုများအပေါ်သို့တက်မလာမချင်းတစ် ဦး တစ်ယောက်သည်အသက်မရှင်သေးပါ။
ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ် ဦး သည်အများသဘောတူညီမှုကိုရှာသူမဟုတ်ပါ၊
“ လိမ်ပြောလို့မရဘူး။ ”
နူးညံ့သိမ်မွေ့သောယောက်ျားများကိုဆက်လက်ထုတ်လုပ်နေသည့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသို့မဟုတ်ယဉ်ကျေးမှုသည်အရောင်းအ ၀ ယ်တွင်မိမိ၏ဝိညာဉ်ရေးသေခြင်းကို ၀ ယ်သည်။
လူမှုရေးတိုးတက်မှုအစီအစဉ်များထက်စစ်တပ်ကာကွယ်ရေးအတွက်ငွေတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ကုန်ဆုံးနေသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသည် ၀ ိညာဉ်ရေးရာပျက်စီးခြင်းကိုချဉ်းကပ်နေပြီဖြစ်သည်။
ကာယစွမ်းအား၏ ၀ ိညာဉ်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထပ်ခါထပ်ခါအောင်မြင်ရမည်။
ထိုကြောင့်ငါဆိုသည်ကား၊ သခင်ဘုရား၊ ၎င်း၊ ကောင်းကင်တမန်ဘာသာစကားကို၎င်းပြောနိုင်သော်လည်း၊ သူတို့ကပီသသောမိန့်ခွန်း၏အဟောအပွောကောငျးရှိစေခြင်းငှါ, ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်သင်၌မရှိ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » စာပိုဒ်တိုများ » မာတင်လူသာကင်း၏အဓိကစကားစုများနှင့်အတူစာရင်းပြုစုပါ